yay: maitiro ekuisa iyi AUR wizard paArch Linux | Linux Vakapindwa muropa
Arch Linux ndiyo inoshanda sisitimu inoshanda kwazvo, asi haisiyo yakanyanya kunaka sarudzo kune vese vashandisi. Nechikonzero ichocho, kunyangwe memes akagadzirwa ayo anoreva kune vashandisi vehunyanzvi uye kune mamwezve mafambisirwo ehushamwari akadai seManjaro kana AntergOS Muchokwadi, ndinonyora yakawanda kubvira Manjaro USB uye ndinofara, muchidimbu naPamac, yavo chitoro chesoftware iyo inotibvumidza isu kuisa ese ese mapakeji, senge zviri muAUR. Asi zvakadiniko nemamwe maArch Linux-based distros? Inogona kunge iri sarudzo yakanaka kushandisa YAY.
Iyo poindi ndeyekuti muArch Linux mune software inofanirwa kuve yakanyorwa. Mushandisi asina ruzivo anogona kupinda mukati AUR uye kuora mwoyo nekukurumidza kana iwe ukaona iyo huru peji, kunyanya kana iwe uchitsvaga chero chero software uye ukaona yakawandisa ruzivo. Yay yakagadzirirwa zvishoma izvi, kuve a wizard kuishandisa pese patinoda kuisa software kubva kuA (rch) U (ser) R (epository). Chirevo chinobva ku "Yet Another Yogurt", uye inounganidza uye inoita zvese zvinodiwa kuisa software kubva kune iyo AUR iyo chero munhu anoshandisa Arch Linux anofarira zvakanyanya (kana isipo, haipo ... yeLinux) .
1 Maitiro ekuisa Yay
2 Kuisa mapakeji uye kutora zvimwe zviito
Maitiro ekuisa Yay
Chaizvoizvo yay tichaita basa rese rinonetesa rekuunganidza isu, kutisiira isu chete basa rekupinda kuraira uye kuongorora dzimwe yambiro, senge yekuisa pasuru kana kana paine dambudziko. Kuti tiise iyo, tichaita zvinotevera:
Isu tinoisa base-devel uye git mapakeji, kana tisina ivo. Iyo mirairo ichave iri inotevera:
Iye zvino tinofanirwa kuisa Yay. Pane mavhezheni maviri, akatsiga uye kusimudzira, uye pano isu ticha tsanangura yakagadzikana vhezheni. Chinhu chekutanga chichava kuumbiridza iyo Git repository, saka tinodzokera kuchiteshi tinyore izvi:
Zvino isu tinoshandura zita remuridzi wedhairekitori renzvimbo, tichichinja "pablinux" nezita remushandisi wako:
Kana isu tisingazive mushandisi kana boka, tinogona kuziva nekutaipa id debugpoint.
Iye zvino tinoenda kune dhairekitori uye tinounganidza:
Tinomirira uye tinenge tatova neiyi software yakasununguka yaiswa.
Kunyangwe ini ndisingazvione zvichinyatso kudikanwa, muManjaro inowanikwa munharaunda yekuchengetera, saka inogona kuiswa ne pacman -S yay.
Kuisa mapakeji uye kutora zvimwe zviito
Kuisa software neiyi wizard kuri nyore. Zvese zvatinofanirwa kuita kuita nyora "yay" pane "pacman". Semuenzaniso, kuisa TuxGuitar, isu tinonyora yay -S tuxguitar. Mimwe mirairo yakafanana neye pacman ndeyekuvandudza (yay -Syu) kana kudzima chirongwa uye ese mafaera ane hukama (yay -Rns tuxguitar).
Muchirongwa ichi chidiki, chinhu chega chakati omei, asi kwete zvakawanda, kuisa wizard. Paunenge waiswa, iwe uchaona kuti zvese zviri nyore pane yako Arch Linux based system, hongu, kana iwe uchida kushandisa iyo terminal kana yako software nzvimbo haibvumiri iwe kuisa iyo AUR software. Chero zvazvingaitika, tinotaura nezvazvo chishandiso chakakosha gadza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Sisitimu Yekutonga » yay: maitiro ekuisa iyi AUR wizard paArch Linux based distros
HERE, haigone kuiswa semanjaro ……
Ini ndoda kurodha pasi zvakanyanya kubva kuAUR
Kana ndichisiya Manjaro nekuda kwekukwidziridzwa kuri kuuya (kunyangwe kune "zvidiki" izvo) ndakazviedza mune inonakidza Artix Linux ine OpenRc, ndakafunga kuti ichandipa imwe kuomerwa, chii chandinoziva nekuve ndisina systemd. Asi hapana, zvese zvashanda zvakanaka. Ndatenda.